ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်နဲ့ မြို့တွင်းပတ်လည်မောင်းဖို့လား? အားလပ်ရက်တွေမှာ ဟိုဟိုဒီဒီ ခရီးထွက်ဦးမလား? Ford ရဲ့ EcoSport ကတော့ နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် သင့်လျော်တဲ့ Compact Crossover SUV ကလေးပါ။ အသေးစိတ်လေ့လာရန် Link 👉https://bit.ly/Ford_Ecospot_Titanium2020 👈မှာ အသေးစိတ်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ ။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့- 👉 Showroom လိပ်စာလေးကတော့…. အမှတ် (၃) ၊ (၁၂) ရပ်ကွက် ၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ( သမိုင်းလမ်းဆုံ အနီး ) ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပြီး ဖုန်းနံပါတ် 01 7521959 သို့ နံနက် 8:30 မှ ညနေ 6:00 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by Redline Media on Wednesday, 1 July 2020
Eco Sport 2020
Ford ကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း အမေရိကန်ကားကုမ္ပဏီပါ။ (၁၉၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက Henry Ford ကစတည်ထောင်ထားတာမို့လို့ ၁၁၇ နှစ် ကျော်နေပါပြီ။) နှစ်တစ်ရာကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ ကားကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်က 1.0L ဓါတ်ဆီ Maximum HP က 123HP နဲ့ Ford EcoSport ရဲ့ 0-100 kilometre-per-hour အတွက် ဘယ်လောက်ကြာမလဲ တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။
- ဈေးနှုန်း - 28,900$
Compact SUV တစ်စီးအနေနဲ့ EcoSport ရဲ့ရုပ်ထွက်က မီးကောင်ပေါက်ကလေးလိုပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတယ်။ မီးတွေကတော့ အခုအချိန် ကာားအသစ်တွေမှာ အတွေ့ရများတဲ့ Projector နဲ့ Reflector ပေါင်းစပ်မီးကြီးတွေပါ။ LED daytime running lamps တို့ fog lamps တို့လည်းပါပါသေးတယ်။ ဘေးဘက်ကြည့်ရင် EcoSport ဆိုတဲ့အတိုင်း sporty ဆန်တဲ့ပုံစံကိုမှ​ တံခါးအခြေမှာ plastic cover တွေနဲ့မို့လို့ ကတ္တာရာစေးစင်တာ၊ ရွံစင်တာတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ body သံသားကလည်း တော်တော်လေးထူတယ်။​ တစ်ခုမိုက်တာက Ford ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်း puddle light ပါတယ်။ ၁၇ လက်မခွေနဲ့ Ground Clearance က ၈ လက်မကျော်ဆိုတော့ တော်ရုံလမ်းတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ၊ အေးဆေးပါပဲ။ နောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းလေးကလည်းနှစ်သက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘီးအဖုံးက metal မဟုတ်ဘူး fiber သားဖြစ်နေတယ်။
ထိုင်ခုံသားရေတွေကောင်းတယ်။ ကြည့်လို့ကောင်းသလို ထိုင်လို့လည်းကောင်းတယ်။ Driver seat က lumbar support လည်းပါတယ်။ တစ်ခုပဲ motor seats တွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။
Steering ကလည်း leather နဲ့ပဲ။ ဒိုင်ခွက်တွေကတော့ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် နည်းနည်းသေးတယ်လို့ ခံစားရပေမဲ့ steering ထဲကလှမ်းကြည့်ရင် လုံးဝအတော်ပဲ။
Infotainment က ၈ လက်မရှိပြီး Apple CarPlay နဲ့ Android Auto ပါတာကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲဗျို့။
Audio ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ speaker ၆ လုံးပါဝင်ပြီး အသံထွက်လည်းမဆိုးပါဘူး။
Air-con ကတော့ dual zone လည်းမဟုတ်သေးသလို … (နောက်ခုံမှာဆက်)
Round air-con လည်းမဟုတ်သေးဘူး။
နောက်ခုံတန်းမှာ ထိုင်ရတာက မဆိုးပါဘူး။ Headroom legroom လွတ်လွတ်ကင်းကင်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုပဲ။ နောက်ခုံတန်းက ကြာရှည်စီးမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတောင့်တယ်လို ခံစားမိပါတယ်။
EcoSport ရဲ့အင်ဂျင်က 1.0L ecoboost တာဘို အင်ဂျင်။ 6-speed automatic transmission နဲ့။ ဆီစားသက်သာသလို ရုန်းအားကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုး Ford ကဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ်။ ဆီစားနှုန်းကတော့....နောက်တစ်ခုထူးခြားတာက သူက 3-cylinder အင်ဂျင်နဲ့ဗျ။ Semi Auto gear ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ puddle shifters တွေကနေလည်း gear ကို လိုသလို ပြောင်းလဲမောင်းလို့ရသေးတယ်။​ ဒါလေးက ဈေးနှုန်းသက်သာပေမဲ့ sporty ဖြစ်တဲ့အချက်ကလေးပါပဲ။
Maximum power က 125hp Maximum torque က 170Nm အထိရမယ်။
Safety ပိုင်းအနေနဲ့ traction control လေအိတ်ပတ်လည် ၆ လုံး ပါတယ်။ လေအိတ်တွေက ထိုင်ခုံတွေထဲမှာပါ မြှုပ်ထားတာမို့လို့ ထိုင်ခုံအစွပ်တွေနဲ့တော့ အသုံးမပြုသင့်ဘူးဗျ။ ABS တို့ EBD တို့ တွေလည်းပါတဲ့အတွက် စိတ်ချလုံခြုံမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကားတစ်စီးပါ။
Boot အကျယ်အဝန်းက 356L အထိ ဝင်ဆံ့မှုရှိတယ်။ ထိုင်ခုံတွေက 60:40 ခေါက်နိုင်ပြီး နောက်ခုံတန်းကိုခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 1,238L အထိ ဝင်ဆံ့မှုကတိုးသွားမှာပါ။
EcoSport ကတော့ ဆီစားနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ မြို့တွင်းပတ်လည်မောင်းနှင်ရုံသာမက အဝေးပြေးလမ်းတွေပေါ်မှာလည်း အကောင်းဆုံးမောင်းနှင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေက EcoSPort ရဲ့အားသာချက်တွေပါပဲ။ Cruise Control မပါတာတို့ Suspension ကနည်းနည်းခုန်တာတို့ကတော့ အားနည်းချက်တွေလို့ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ရေရှည်ကုန်ကျစာရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့ sporty ဆန်ဆန် compact SUV ကိုမှလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Ford ရဲ့ EcoSport လိုမျိုးက ရှာရခက်ပါလိမ့်မယ်။